BBQ Chicken Check-in Promotion 1190 views
BBQ Chicken Check-in Promotion
BBQ Chicken Myanmar ကနေ နိုဝင်ဘာ ၂၀ မှ နိုဝင်ဘာ ၃၀ အထိ ပြုလုပ်မယ့် Promotion အစီအစဉ်လေးအကြောင်း MyLann သူငယ်ချင်းတွေကို ဦးဦးဖျားဖျားပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ BBQ Chicken Myanmar ရဲ့ Facebook Page တွေမှာ Check-in လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ ဘယ် Pasta ကိုမဆို 40% Off ပေးနေပါပြီ။ လတ်ဆတ်ပြီး အရသာအရမ်းရှိတဲ့ Pasta တွေကို BBQ Chicken ရဲ့ဘယ်ဆိုင်ခွဲမှာမဆို ချိုချိုသာသာနဲ့ သုံးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်ပေးတဲ့ ဒီအခွင့်အရေးကိုလက်လွှတ်မခံဘဲ ပါဝင်လိုက်ရအောင်နော်။
အောက်ပါအချက်များကို လုပ်ဆောင်ရုံလေးနဲ့ BBQ Chicken Myanmar မှ Pasta Menus များကို 40% Discount ရမှာနော်.
၁) မိမိရဲ့ Facebook နဲ့ BBQ Chicken Myanmar Page ကို ရှာပြီး Like နှိပ်ပေးပါ။ (https://www.facebook.com/BBQChickenMyanmar)
၂) BBQ Chicken Myanmar Page တွင် Check In ဝင်ပါ။
၃) မိမိပြုလုပ်ထားသည်များကို ငွေမရှင်းခင်ကြိုတင်၍ဆိုင်တာဝန်ခံ (သို့) စားပွဲထိုးလေးများအား ပြသပေးပါ။
၄) သတ်မှတ်ထားသောပုံစံမှာ ဖြည့်စွက်ပေးပါ။
(1) Please search the BBQ Chicken Myanmar page and click "Like" button.
(2) Please Check-in at BBQ Chicken Myanmar page.
(3) Please show your check-in to our Branch Manager (or) Waiters before paying the bill.
(4) Please fill in the Survey form.
အထက်ပါအချက်များနဲ့ ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်တော့ Pasta Menus တွေအတွက်သာ ပေးတဲ့ Discount 40% ရပါပြီနော်….
အချိန်ကာလကတော့ ၂၀၁၄ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၀ရက်နေ့ ကနေ ၃၀ရက်နေ့အထိဖြစ်ပြီး BBQ Chicken ဆိုင်အားလုံးမှာ အားပေးနိုင်ပါတယ်နော်……
ယခု Promotion လေးကိုတော့ ဆိုင်တွင်သာ သုံးဆောင်ရန်အတွက် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၊ အခြားသော Discount များ ၊ ပါဆယ်ဝယ်ယူခြင်းများနှင့် အိမ်အရောက်ပို့စနစ်များဖြင့် တွဲဖက်ခံစားခွင့်မရှိပါ။
BBQ Chicken ဆိုင်ခွဲများရဲ့ လိပ်စာကတော့
၁) BBQ Chicken Central Branch
ဗိုလ်ချုပ်လမ်း နှင့် ၃၁လမ်းထောင့်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း - 01-388981
၂) BBQ Chicken Junction Mawtin Branch
Junction Mawtin Shopping Mall , လမ်းမတော်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ ဖုန်း - 09 254106354
၃) BBQ Chicken Sein Gay Har Branch
စိန်ဂေဟာစင်တာ ၊ ပြည်လမ်း ၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။ ဖုန်း - 09250613329